Dopamine သည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအမျိုးသားများအတွက် Testosterone-Induced လူမှုဆုလာဘ်ကို (၂၀၁၃) စေ့ဆော်ပေးသည် - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Dopamine, testosterone နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်
Dopamine အမျိုးသားဆီးရီးယားဟမ်းစတား (2013) တွင် testosterone-သွေးဆောင်လူမှုဆုကြေး Mediates
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2013 မတ်လ; 154 (3): 1225-1234 ။
2013 ဇန်နဝါရီ 31 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1210 / en.2012-2042
မာဂရက် R. ဘဲလ် နှင့် Cheryl အယ်လ် Sisk
လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုများ၏ဆယ်ကျော်သက်ရငျ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-ပုံမှန် sociosexual အပြုအမူများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သဘာဝကျကျလူမှုရေးဆုလာဘ်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ပြောင်းလဲမှု neuroendocrine ယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့အကောင်းတစ်ပုံစံစနစ်ကပေးတဲ့အဓိကလူမှုရေး cue အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက် (VS) အားအထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ဒါပေမယ့်လူငယ်ဘဲ, ယောက်ျား VS အပျိုဖော်ဝင်မရောက်မီအကြိုးမပေးကြောင်းညွှန်ပြ, VS တစ် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပြသပါ။ စမ်းသပ်ချက်၏ဤစီးရီးထဲမှာ, စာရေးဆရာများ vs. ၏အပြုသဘောဆောင် valence အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအမြတ်ဖြန်ဖြေအတွက် Testosterone နဲ့ dopamine အဲဒီ receptor activation များ၏အခန်းကဏ္ဍလေ့လာ စမ်းသပ်မှု 1 gonadectomized အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟမ်းစတား vs. တစ် CPP ကဖွဲ့စည်းရန်အဘို့အ testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးလိုအပ်သောကြောင်းပြသ စမ်းသပ်မှု2testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု VS တစ် CPP ကဖွဲ့စည်းရန်, ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက် VS တစ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ dopamine အဲဒီ receptor ရန် haloperidol လုပ်ကွက်ဖွဲ့စည်းရေးကြောင်းမှလူငယ်ဟမ်းစတားများအတွက်လုံလောက်သောကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ချက်3နှင့်4haloperidol ၏အနိမ့်ဆေးများနှင့်အတူ VS ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏နှောင့်အယှက်တစ်ခု VS ၏ဆွဲဆောင်မှုဂုဏ်သတ္တိများအတွက်လျှော့ချရေးနှင့် haloperidol ၏ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများဖို့တွေကပေါ်ကနေမဟုတ်၏ရလဒ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများအောင်မြင်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ sociosexual interaction ကလိုအပ်သောလူမှုရေး cue ၏ခြွင်းချက်မရှိကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအထီးဟမ်းစတားအတွက် testosterone ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက် pubertal တိုး၏ရလဒ်အဖြစ်အကြောင်းကိုလာပါတယ်။ သရုပ်ပြ ထို့အပွငျ, ဒီလူမှုရေးဆုလာဘ် hypothalamic နှင့် / သို့မဟုတ် mesocorticolimbic dopaminergic ဆားကစ်လူမှုရေးဆုလာဘ်၏ဟော်မုန်း activation များအတွက်ပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်း။ ညွှန်ပြ, dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တားဆီးနိုင်ပါသည်
သင့်လျော်စွာအောင်မြင်သောအရွယ်ရောက်လူမှုရေး interaction ကများနှင့်မျိုးပွားမှုကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုပြန်ဆို၏လိုအပ်ချက်ပေးထား, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ psychobiology များအတွက်အခြေခံပြဿနာလူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးရငျ့အခြေခံသည့် neuroendocrine ယန္တရားများ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက် (VS) ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်မှီခိုသောကွောငျ့အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား (လူမှုရေးတွေကိုမှ၏အမြင်နှင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုလေ့လာဖို့ရာနှင့်အတူတစ်ဦးအသုံးဝင်သောမော်ဒယ်ပေး1, 2), နှင့်၎င်းတို့၏ endocrine, အာရုံကြော, ဤမျိုးစိတ်အတွက်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီသည့် postnatal အသက်တာ၏ဒုတိယလ, (စဉ်အတွင်းရင့်ကျက် VS မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု3, 4) ။ Juvenile အထီးဟမ်းစတား (VS မှအရွယ်ရောက်ပြီးသူ-ပုံမှန်ဆွဲဆောင်မှုမပြဘူး5) ။ ထိုမှတပါး, VS လိင်ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်သောကြောင့်သာအပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်တစ်ခြွင်းချက်မရှိဆုလာဘ်သော်လည်း, လူငယ်, အထီးဟမ်းစတား (သူတို့အဘို့ conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ဖွဲ့စည်းရန်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်6, 7) ။ VS မှဆွဲဆောင်မှု, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တူ, (အရွယ်ရောက်သူများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်8, 9), နှင့် VS မှဆွဲဆောင်မှုလူငယ်အမျိုးသားများ၏ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုအားဖြင့်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ် (5) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ VS ၏အားဖြည့်တန်ဖိုးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူသို့မဟုတ်လူငယ်ဟမ်းစတားဖြစ်စေများတွင်အလားတူ testosterone ဟော်မုန်း-မှီခိုရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး။
ကြွက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိ chemosensory ဖို့အရေးပါတဲ့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (Acb) (ထဲမှာ dopamine များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်10-20) ။ အထူးသ dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များစွာရှုထောင့်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ haloperidol ၏ဥပမာအားဖြင့်, စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု, တစ်အများစု D2 dopamine အဲဒီ receptor ရန် (NIMH Psychoactive မူးယစ်ဆေးစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်, http://pdsp.med.unc.edu), (ယခင်ကလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ် olfactory တွေကိုအဘို့လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးကြွက်များနှင့် conditional လှုံ့ဆျောမှုအတွက်အဓိကအမျိုးသမီးအမြင်အာရုံ, အာရုံအဘို့အခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆျောမှုနှင့် chemosensory တွေကိုလျော့နည်းစေ21, 22) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း (က D2 အဲဒီ receptor ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည်23) ။ သို့သော်အခြားသောလေ့လာမှုများ (dopamine အဲဒီ receptor activation အထီးကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီဘို့မလိုအပ်ပါကြောင်းတွေ့ကြပြီ24-26) ။ ဒါဟာ dopamine အဲဒီ receptor activation အထီးဟမ်းစတားအတွက် VS မှချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်လိုအပ်သောရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ gonad-နဂိုအတိုင်းလူငယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟမ်းစတားအကြားအပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှု vs. ၎င်းတို့၏ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုများကထင်ဟပ်ဖြစ်ကြောင်းသိလား အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ဒါပေမယ့်မရလူငယ်, ကြွက်ကို (MPOA အတွက် VS တုံ့ပြန် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဇီဝြဖစ်တစ်ခုတိုးလာကိုပြသ18) ။ အလားတူပင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ဒါပေမယ့်လူငယ်မဟုတ်, ကြွက်ကို (Acb အတွက် VS, ventral tegmental ဧရိယာတုံ့ပြန် Fos ဖော်ပြနှင့် prefrontal cortex medial7) ။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး dopaminergic function ကို၏အမြတ် VS ဆုလာဘ်များနှင့်ဆွဲဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွက် Dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြွက်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သင်း (wk2မှ 8 ပြီးနောက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, အ Acb နှင့် MPOA အတွက် Basal dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ရာ27) ။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးသမီးတစ်ဦး precopulatory MPOA dopaminergic တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အထံ gonadectomy နှင့်နောက်ဆက်တွဲ testosterone ဟော်မုန်း-အစားထိုး (အကြာတွင် copulatory အပြုအမူများအသီးသီးသည်မျိုးသုဉ်းဒါမှမဟုတ် recovery ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်11, 28) ။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (apomorphine ၏စနစ်တကျနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် MPOA ထိုးခြင်းဖြင့်ရေရှည် castrated အထီးကြွက်တစ် dopamine agonist ပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ29) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုနှင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း dopamine circuitry ပြောင်းလဲမှု (30, 31) ။ ထို့ကြောင့်, လေ့လာမှုများဤအခန်းဆက် testosterone ဟော်မုန်းစံပြ system အဖြစ်, dopaminergic ဆုလာဘ် circuitry အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေတဆင့်လူမှုရေးဆုလာဘ်မြှင့်လုပ်ဆောင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် VS မှချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အသုံးပြု. နှင့်လူငယ်အထီးဟမ်းစတားသောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ဆီးရီးယားဟမ်းစတား (Mesocricetus auratus) ကို Harlan Laboratories (Madison, Wisconsin) မှရရှိပြီးအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်သည့် vivaria များတွင်အလင်းဖြင့်ထားရှိသည်။ ၁၄ နာရီအလင်းရောင်မှောင်မိုက်သံသရာ - ၁၀ နာရီအမှောင်နှင့် ad libitum အစားအစာသို့ဝင်ရောက်ခြင်း (Teklad Rodent diet 14; Harlan Laboratories) နှင့်ရေ။ ဆိုက်ရောက်သည့်အခါ (အသက်အရွယ်အတိအကျစမ်းသပ်မှုများကိုကြည့်ပါ) လူငယ်ယောက်ျားလေးများသည် P10 တွင်နို့မထွက်မှီတိုင်အောင်သူတို့၏ယောက်ျားလေးများနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမိခင်များနှင့်အတူနေခဲ့ကြသည်။ နို့နှင့်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း Polycarbonate အိတ်များ (၃၀.၅ × ၁၀.၂ × ၂၀.၃ စင်တီမီတာ) တွင်ထားသည်။ ယောက်ျားအားလုံးသည်လေ့လာသည့်အချိန်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြေရှာကြပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်း၌သာအသုံးပြုသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးမုန့် ၆၀ သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၂ လအရွယ်ဖြစ်ပြီးသီးခြားသော vivaria များတွင်နေထိုင်ပြီး VS ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ VS လျှို့ဝှက်ချက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်အခါအမျိုးသမီးဟမ်းစ်ဟော်မုန်း - သွေးဆောင် estrus ၏နေ့ကိုစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်ဘို့ဟော်မုန်းမတိုင်မီရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာ ovariectomized ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က 8640 μg estradiol benzoate နှင့် 18 μg progesterone နှင့်နှမ်းရေနံအတွက် 30.5 နှင့် 10.2 နာရီအသီးသီး, VS ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်အင်္ဂါ palpation အားဖြင့်အသီးသီးနှင့်အတူအသီးသီးထိုးသွင်းခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုများအားလုံးကိုအနီရောင်အလင်းရောင် ၄ မှ ၁ မှ ၅ နာရီအတွင်းအမှောင်ထုသို့ရောက်ခဲ့သည်။ Hamsters အမျိုးသားကျန်းမာရေး Institutes နှင့်အညီကုသခံခဲ့ရသည် ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကိုလမ်းညွှန်နှင့် protocol များဟာမီချီဂန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
gonadectomized (GDX) စမ်းသပ်အုပ်စုများအတွက်ဟမ်းစတား isoflurane မေ့ဆေးနှင့်အတူခွဲစိတ်။ နှစ်နိုင်ငံ longitudinal scrotal ခွဲစိတ်ခဲ့သဖြင့်, ဝှေးစေ့ (အရွယ်ရောက်သူ) သို့မဟုတ် cauterization (Juvenile) ligature တစ်ဖြတ် distal နှင့်အတူဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ GDX +0နှင့် GDX + T ကိုအုပ်စုများလည်းအရေပြားအောက်ဆုံး (အသီးသီး2ကွက်လပ်သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်သော silastic တောင့နှင့်တသားတ5မီလီမီတာနှင့်အတူအသီးအသီးအဆုံးအပေါ်တံဆိပ်ခတ် testosterone ဟော်မုန်းတွေထဲက 13 မီလီမီတာ [Sigma-Aldrich, St.Louis, Missouri] ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ4မီလီမီတာ silastic ကော်; အတွင်းအချင်း 1.98 မီလီမီတာ; အပြင်ဘက်အချင်း 3.18 မီလီမီတာ) ။ ဤရွေ့ကားတောင့, testosterone ဟော်မုန်း (~2-7 ng / ml ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူဇီဝကမ္မအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ် စားပွဲတင် 1) ။ ဘာသာရပ်များ 24 နာရီအကြာတွင်နောက်တဖန်ခွဲစိတ်၏အချိန်တွင် ketoprofen analgesic တစ်အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးခံ။
ဗိုလ်လုပွဲအုပ်စုအရွယ်အစား, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အနစ်နာခံ၏အချိန်မှာ Plasma testosterone အာရုံစူးစိုက်မှု
plasma testosterone ဟော်မုန်းအတိုင်းအတာ
တစ်နာရီသည့်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီစမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်နောက်ဆုံး olfactory စမ်းသပ်မှုပြီးစီးပြီးနောက်, ကြွက်ဆိုဒီယမ် pentobarbital (150 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, intraperitoneal) ၏တစ်ဦးအလွန်အကျွံသုံးစွဲနှင့်အတူ euthanized ခဲ့ကြသည်နှင့် terminal ကိုအသှေးကိုနမူနာ plasma testosterone ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့၏ radioimmunoassay ဘို့နှလုံးပေါက်ကနေတဆင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း၏မိတ္တူပွား 50-μlနမူနာအင်္ကျီ-A-Count စုစုပေါင်း testosterone Kit (Diagnostic ထုတ်ကုန်များ, Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား) ကို အသုံးပြု. တစ်ခုတည်း assay အတွင်းဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ နိမ့်ဆုံးရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် assay ကိန်းအသီးသီးစမ်းသပ်ချက် 0.08 နှင့် 7.9 အတွက်% ml နှင့် 12ng / နှင့် 0.12 ng / စမ်းသပ်ချက် 5.8 နှင့်3အတွက်% ml နှင့်4ခဲ့ကြသည်။ ငါးဦး (စမ်းသပ်မှု 2) နှင့်2(စမ်းသပ်မှု 3) ဟမ်းစတားကသူတို့ testosterone ဟော်မုန်းတောင့ midexperiment ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လေ့လာဆန်းစစ်အပြုအမူသို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ဗိုလ်လုပွဲအုပ်စုသည်အရွယ်အစားပေးစား စားပွဲတင် 1.
နေရာအရပ် preference ကိုအေးစက်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (ဖြစ်ပွားခဲ့သည်6, 7) 1 အလယ်အခန်းနှင့်2ပြင်အခန်း (Med Associates မှ, စိန့် Albans, ဗားမောင့်) နဲ့တစ်ဦးယန္တရား၌တည်၏။ ဤရွေ့ကားပြင်အခန်းအခန်း-တိကျတဲ့အသင်းအဖွဲ့များ, ကွဲပြားအမြင်အာရုံနဲ့အတူထိတွေ့နိုင်သောနှင့် olfactory တွေကိုအဘို့အခွင့်ပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CPP က regimen စတင်ခင်တိရစ္ဆာန်များကိုင်တွယ်နှင့်ဝတ္ထုအခန်းများ2ဃမှ acclimated ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CPP က regimen တစ်ခုချင်းစီကိုဟမ်းစတားအဘို့ (10 ဇ±) နေ့၏တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့အားလုံးရသောတစ်ဦး pretest, 1 အေးစက်အစည်းအဝေးများနှင့်စမ်းသပ်မှု, ပါဝင်သည်။ 8 မှာ 00 နံနက်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း:9နံနက်လိုအပ်အလိုက်၏နံပါတ်လျှော့ချနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အနံ့ကိုထိန်းချုပ်တိရိစ္ဆာန်များဖော်ထုတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့, ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအမှောင်ထဲမှာအဆင့် 00 မှာစတင်ခဲ့သည့်အတွက်သီးခြားအခန်းတစ်ခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။2မှာ 00 ညနေများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း:3ညနေစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအမှောင်အဆင့် 00 မှာစတင်ခဲ့ရာအခန်းပေါင်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။
တစ် ဦး က pretest (အလယ်အခန်း၌2မိနစ်အားလုံးအခန်းများမှ 15 မိနစ်ဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်) မည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုပစ္စုပ္ပန်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီဟမ်းစတားရဲ့ကန ဦး အခန်း preference ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခန်ဓာကိုယ်ကိုအချိန်ပိုပေးသည့်အပြင်ဘက်ပိုင်းအခန်းကိုကန ဦး ဦး စားပေးအခန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ [ကန ဦး ဦး စားပေးအခန်းတွင်အချိန် - (အစကန ဦး အပိုနှစ်သက်အခန်းရှိအချိန် + ကန ဦး အသုံးမပြုသောအခန်းရှိအချိန်)] နှင့်သတ်မှတ်ထားသောကွာခြားမှုရမှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ဦး စားပေးရမှတ်ကိုသတ်မှတ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုစီအတွက်တွက်ချက်သည်။6) ။ တစ်ဦးချင်းစီဟမ်းစတားတစ်ဦးအသိပေး preference ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်, တစ်ခုချင်းစီအခန်းထဲသို့ဝင်မဟမ်းစတားကအနည်းဆုံး5ကြိမ်ထပ်မံလေ့ကျင့်ရေးကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ကနဦးအခနျးဦးစားပေးများနှင့် preference ကိုရမှတ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအတွင်းအမှိုက်သရိုက်များကိုယ်စားပြုမှုများအတွက်အုပ်စုများတူညီသကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်များစမ်းသပ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများမှတာဝန်ကျတယ်။
အဆိုပါ pretest ပြီးနောက်, ဟမ်းစတား 10 မလှုံ့ဆော်မှုနှင့် 30 လှုံ့ဆော်မှု-တွဲအစည်းအဝေးများပြောင်း, ရက်ဆက်တိုက်အပေါ်တစ်နေ့လျှင် 1 session တစ်ခုနားမှာအခန်းအတွက်55 မိနစ်အေးစက်အစည်းအဝေးများတစ်ဦးစုစုပေါင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ no-လှုံ့ဆော်မှုအေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစမ်းသပ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဟမ်းစတားသူတို့တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်ရှိရာ၎င်းတို့၏အစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းအတွက်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ လှုံ့ဆော်မှု-တွဲအေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစမ်းသပ်အုပ်စုဟမ်းစတားအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူပိုင်းတွင် nonpreferred အခန်း၌ထားကြ၏။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်ဟမ်းစတားလည်း၎င်းတို့၏ကနဦး nonpreferred အခန်း၌ထားကြ၏ပေမယ့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမပေးသောခဲ့ကြသည်။ ဤအုပ်စုအေးစက်နေစဉ်အတွင်းလေ့ဖို့တွေကပေါ်ကနေဖြစ်ကြောင်းစမ်းသပ်မှုများအနှံ့ preference ကိုသို့မဟုတ်ခြားနားချက်ရမှတ်အတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲများကိုတွက်ချက်ရန်ဝတ်ပြုကြ၏။ အဆိုပါ CPP ကယန္တရားတစ်ခုစီကိုတိရိစ္ဆာန်အကြား 25% အီသနောနှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်စင်ခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီအေးစက်တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာ 75% အီသနောနှင့်အတူခဲ့သည်။
စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2ခုနှစ်, VS အေးစက်အစည်းအဝေးများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အသုံးမပြုခင်တစ်နာရီခန့် 500 30 အမျိုးသမီးထံမှကောက်ယူစီအထီးတူညီသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကွောငျးသေချာစေရန်အတူတကွရောနှောခဲ့ကြ VS μl။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 VS ချင်းစီအထီးတစ် 2-ml ကို Eppendorf ပြွန်ထဲသို့ထုပ်ပိုးရေစိုစွတ်ကြ၏ချည်ပိတ်ကျဲစ, 1 ပြွန်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြμl။ ထိုခဏခြင်းတွင်စမ်းသပ်မှီ, ပြွန်အဆိုပါ VS အုပ်စု VS-တွဲအေးစက်အစည်းအဝေးများအတွက်အစပိုင်းတွင် nonpreferred အခန်းအတွက်နောက်ကျောထရံထိပ်မှာအထီးကနေလက်လှမ်းမမီထဲကနေရာချပေးခဲ့သည်။ အချည်းနှီးသော Eppendorf ပြွန်အားလုံးအေးစက်အစည်းအဝေးများအတွက်ထိန်းချုပ်အုပ်စုနှင့်မနှိုးဆွအေးစက်အစည်းအဝေးများအတွက် VS အုပ်စုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ VS ၏ nonvolatile အစိတ်အပိုင်းများကိုထိတွေ့စေရန်, ကျန်ရှိနေသေးသော ~200 ချက်ချင်းမတိုင်မီ VS ဓာတ်သတ္တုဆီ 1.5 ml နှင့်အတူရောနှောခဲ့ကြ, ဤအရောအနှောများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 μlအဆိုပါ VS အုပ်စုတွင်ကြွက်များ၏နှာခေါင်းပေါ်သို့တိုက်ရိုက်သတ္တု spatula နှင့်အတူလျှောက်ထားခဲ့သည်μl ဟမ်းစတားဟာ VS-တွဲအခန်း၌ထားကြ၏။ စင်ကြယ်သောရေနံအားလုံးအေးစက်အစည်းအဝေးများနှင့်မျှမ-လှုံ့ဆော်မှုအေးစက်အစည်းအဝေးများများအတွက် VS အုပ်စုတွင်သူတို့အဘို့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ကြွက်များ၏နှာခေါင်းမှလျှောက်ထားခဲ့သည်။
နှစ်ဆယ်လေးပါးနာရီနောက်ဆုံးအေးစက် session တစ်ခုအပြီး, ကြွက်တို့သည် pretest အတှကျအသုံးပွုအတူတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌ preference ကိုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ pretest ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိ, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပစ္စုပ္ပန်ကြီးနှင့် preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များတစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 1: အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟမ်းစတားအတွက် VS တစ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သော testicular ဟော်မုန်းဖြစ်ပါသလား
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုပျံ့နှံ့နေတဲ့ testicular ဟော်မုန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဟမ်းစတားအတွက် VS တစ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ display ကိုအဘို့လိုအပ်သည်ရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာရှေ့ပြေးလေ့လာမှုများ (အေးစက် gonadectomy ပြီးနောက် 1 wk စတင်ခဲ့သည့်အခါအထီးဟမ်းစတား VS တစ် CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ32), (အထီးကြွက်များတွင် gonadectomy ပြီးနောက်အများအပြားရက်သတ္တပတ်ကျော်ကဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာဆင်တူ, testicular ဟော်မုန်း putative Active သက်ရောက်မှု acute ထွက်ကိုလျှော်မအကြံပြုခြင်း33) ။ ထို့ကြောင့်ဤစမ်းသပ်မှုအတွက်ကျနော်တို့အေးစက်ရဲ့ start မတိုင်မီ GDX 10 ပတ်ခဲ့ကြောင်းဟမ်းစတားလေ့လာခဲ့သည်။ အားလုံးအရွယ်ရောက် postnatal နေ့က P56-63 မှာဓာတ်ခွဲခန်းသို့ရောက်ရှိလာခဲ့, ဒါပေမယ့်အုပ်စုများတစ်ချိန်တည်းမှာစုံစမ်းစေနိုင်အောင်ရောက်မှုနိုင်အောင်ပြင်းထန်စွာခဲ့ကြသည်။ no-လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်တိရိစ္ဆာန်များ gonad-နဂိုအတိုင်း left နှင့် P64-71 မှာ pretested ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ GDX +0အုပ်စုဟမ်းစတား P57-64 မှာ GDX ခဲ့ကြသည်, wk 10 များအတွက် unmanipulated ကျန်ရစ်, ပြီးတော့ P127-134 မှာ pretest မတိုင်မီ P1-134, 141 ရက်သတ္တပတ်မှာအလွတ်တောင့နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ အဆိုပါ GDX + T ကိုအုပျစု GDX ကြီးနှင့်သိသိသာသာ CPP ကသရုပ်ပြအဖြစ်အပြုသဘောထိန်းချုပ်မှုအစေခံရန်, P57-64 မှာ pretest မတိုင်မီ P1-64, 71 ရက်သတ္တပတ်မှာ testosterone ဟော်မုန်းတောင့ပေးတော်မူ၏။ ဒီအစီအစဉျကိုအေးစက်လိုအပ်သောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်မှာတိရစ္ဆာန်တွေကိုစမ်းသပ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် (ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ဒီ variable ကိုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းကြိုတင်စမ်းသပ်မှုများတွင် testosterone ဟော်မုန်းမှအမူအကျင့်သို့မဟုတ်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိဖူးဘူး34) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ GDX +0အုပ်စုသူတို့အားအလားတူအသက်အရွယ်မရွေး GDX / testosterone ဟော်မုန်း-ကုသအထီးဟမ်းစတားယုံကြည်စိတ်ချရသော (VS တစ် CPP ကဖွဲ့စည်း35) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ 10 ပတ် no-လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်နှင့် GDX + T ကိုအုပျစုမြားကိုထိနျးသိမျးမလိုအပ်သောကြီးနှင့်ဒါလုပ်နေတာ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအပြစ်လွတ်နိုင်ဘူးထင်။
စမ်းသပ်မှု 2: လူငယ်ဟမ်းစတားအတွက် VS တစ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်လိုအပ်သော Testosterone နဲ့ dopamine အဲဒီ receptor activation ရှိပါသလား
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုလူငယ်အထီးဟမ်းစတားအတွက် VS မှ testosterone ဟော်မုန်း-facilitated ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက် dopamine များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ P12 မှာရောက်လာပြီး P20 မှာ pretested ဖြစ်. ,3အလိုက်အတွက် run ခဲ့ကြသည်။ အခြားအုပ်စုများ GDX တို့ P13, စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ 1 သီတင်းပတ်မှာအလွတ်သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းတောင့ပေးထားသော်လည်း Gonad-နဂိုအတိုင်းဟမ်းစတားမရှိ-လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ GDX +0အုပ်စုသည် (gonad-နဂိုအတိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့) testosterone ဟော်မုန်း၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ Juvenile vs. တစ် CPP ကမပြကြဘူးကြောင်းအတည်ပြုရန်ပါဝင်သည်ခဲ့သည် တစ်ဦးက GDX + T ကိုအုပျစု testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု vs. တစ် CPP ကသွေးဆောင်နိုင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် ကျန်ရှိသောအဖွဲ့များကိုအသီးသီးအားလုံး GDX + T ကိုတို့ haloperidol ၏ intraperitoneal ထိုးပေးသော (0.05, 0.15 နှင့် 0.45 / ကီလိုဂရမ် mg) ခံခဲ့ရသည်သို့မဟုတ် VS မတိုင်မီ propylene glycol မော်တော်ယာဉ် 30 မိနစ်နှင့်မျှမ-လှုံ့ဆော်မှုအေးစက်အစည်းအဝေးများ။ Haloperidol တစ်အစွမ်းထက် D2 ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်း, (လျော့နည်းထိရောက်စွာ NIMH Psychoactive မူးယစ်ဆေးစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ် D1, adrenergic နှင့် Sigma receptors ခညျြနှောငျနိုငျပါသညျ http://pdsp.med.unc.edu/) ။ no-လှုံ့ဆော်မှု, GDX +0နှင့် GDX + T ကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးအေးစက်အစည်းအဝေးများမတိုင်မီ propylene glycol မော်တော်ယာဉ်ထိုး 30 မိကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 3: တစ်ဦးတည်း dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလူငယ်ဟမ်းစတားနေရာ preference ကိုပြောင်းလဲပစ်သလား
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှု2များတွင်အသုံးပြု haloperidol ၏ဆေးများသူတို့တစ်တွေ conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) သွေးဆောင်မယ်လို့ထိုကဲ့သို့သောကြောင်း testosterone ဟော်မုန်း-ကုသဟမ်းစတားအတွက်မဆိုအခ်ါဆန္ဒရှိအရည်အသွေးတွေ, ရှိခဲ့ပါတယ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလျှင်, စမ်းသပ်မှု2အတွက် VS များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် haloperidol-အေးစက်ပတ်ဝန်းကျင်၏ရှောင်ရှားရန်တွေကပေါ်ကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ, P11 သို့မဟုတ် P12 ရောက်ရှိလာသည် P13 မှာ GDX + T ကိုတည်ကြသည် ဖြစ်. , P20 မှာ pretested နှင့်2နေ့နိုင်အောင်ပြင်းထန်စွာ 1 အလိုက်အတွက် run ။ ကြောင်းဖော်ပြထားသကဲ့သို့အလားတူအေးစက်ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခဲ့သည်, ဒါပေမယ့် haloperidol ကနဦးဦးစားပေးလျှော့ချဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းပေးထားခဲ့ပါတယ်နှင့်မျှမ VS အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း Locomotor လှုပ်ရှားမှု (အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်အားလပ်ချိန်များတွင်အပြောင်းအလဲများအရေအတွက်) နှင့် fecal boli output ကိုလည်း haloperidol ၏ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှု၏အညွှန်းကိန်းများအဖြစ် quantified ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 4: dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလူငယ်ဟမ်းစတားအတွက် VS မှဆွဲဆောင်မှုထိခိုက်စေသလား
ဒါဟာစမ်းသပ်မှု haloperidol vs. ၏ဆွဲဆောင်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုလျော့နည်းစေခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလုံလောက်ရှာဖွေရေး၏ pretest ပြီးနောက် (နှင့်မဆို haloperidol ထိတွေ့ခြင်းမပြုမီ) စမ်းသပ်မှု3မှဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်တိရိစ္ဆာန်များကဒီမှာကိုအသုံးပြုကြသည် ဟူ. ၎င်း, အရှင်ဤယောက်ျား GDX တို့ P11 အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း-ကုသနှင့် P12-13 အပေါ်5ရက်ပေါင်းကျော်စမ်းသပ်ပြီး, P28-32 ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ VS, စမ်းသပ်ခြင်း၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကမတိုင်မီလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးသမီး 1 နေ့မှစ. စုဆောင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, ~14 အမျိုးသမီးထံမှ VS 100 Eppendorf ပြွန်၏ 1 သို့ဓာတ်သတ္တုရေနံμl5အတူရောနှောခဲ့ကြသည်။ ပြွန်နေ့ရက်တိုင်းစမ်းသပ်၏ကာလမတိုင်မီက4မိနစ် thawed ခဲ့သည် 1 ပြွန်သည်အထိကို C ° 30 မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကသတ္တု spatula ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 သိက္ခာချဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းစမ်းသပ်မီ, တစ်ဖန်ဆလိုက်ပေါ်သို့ဟမ်းစတားနှုန်း 1 စင်ကြယ်သောဓာတ်သတ္တုရေနံသို့မဟုတ် VS အရောအနှောμl။ တစ်ဦးကသန့်ရှင်း VS-လူးဆလိုက်5ဖန် aquaria ၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်မှာထရံကို (51 × 26 × 31.5 စင်တီမီတာ) (ထံမှအဆင်ပြေအောင်နေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၌ထစင်တီမီတာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် taped ခဲ့ကြသည်36, 37) ။ အနံ့၏တည်နေရာအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်တိရစ္ဆာန်အတွင်း counterbalanced ခဲ့သည်။
ရက်ပေါင်း 1 နှင့်5တွင်, တိရိစ္ဆာန်များ 30 မိနစ်စမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီ intraperitoneal propylene glycol မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။2မှရက်ပေါင်း4တွင်, တိရိစ္ဆာန်များ counterbalanced နိုင်ရန်အတွက်, 0.05, 0.15, ဒါမှမဟုတ် 0.45 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် haloperidol နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုချက်ချင်းစမ်းသပ်မတိုင်မီအထိသူတို့၏ကိုလိုနီအခန်းထဲမှာကျန်ရစ်၏။ စမ်းသပ်ခြင်းကိုစတင်ရန်, ဟမ်းစတားဟာငါးမွေးကန်များ၏အလယ်၌ထားကြ၏နှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-သွင်းယူနှင့်ဗီဒီယို5မိနစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုပြီးစီးအပေါ်သို့, ကြွက်တို့သည်ဆလိုက်အားဖယ်ရှား, သူတို့ရဲ့ကိုလိုနီအခန်းသို့ပြန်ရောက်ခဲ့ကြနှင့် aquaria 75% အီသနောနှင့်အတူသန့်ရှင်း။ တစ်ဦးဟမ်းစတားဆလိုက်ရာမှ 0.5 စင်တီမီတာထက်လျော့နည်းနှာခေါင်းနှင့်အတူအသီးအသီးဆလိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသုံးစွဲအချိန်ရဲ့အရှည်, အ VS ပြွန်၏တည်နေရာတစ်ဂိုးသွင်းမျက်စိကန်းသောအားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအသံသွင်းထံမှ quantified ခဲ့သည်။ တစ်ခုကဆွဲဆောင်မှုရမှတ် (VS ဆလိုက်တွေနဲ့အချိန် - ရေနံဆလိုက်တွေနဲ့အချိန်) တစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်တွက်ချက်ခဲ့သည်။
အားလုံးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအုပ်စုများ ANOVA အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်လမ်းအလားတူကနဦးဦးစားပေးများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုရန်။ ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုစမ်းသပ်ချက် 1 မှ3အတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီသို့မဟုတ်တကြ် CPA သွေးဆောင်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, preference ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်ကွာခြားချက်ရမှတ် (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်7) ။ ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်ခြားနားမှုရမှတ်များပြောင်းလဲခြင်းကိုဟမ်းစ်အိတ်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်စမ်းသပ်မှုအတိုင်းအတာကိုနုတ်ယူခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, ဦး စားပေးရမှတ်နှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်အဘို့အပျမ်းမျှပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာမှုမရှိသောပြောင်းလဲမှုများအတွက်စံပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကို ဦး စားပေးနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များတွင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောတိရိစ္ဆာန်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ရမှတ်များမှခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုကိန်းဂဏန်းများတွင်မပြပါ။ preference ကိုနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်အတွက်တညျ့အပြောင်းအလဲများထို့နောက် 1- နမူနာများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် t အခွင့်အလမ်းဦးစားပေးအနေဖြင့်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်ဖို့သုညမှတန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတိုင်းအတွင်းစမ်းသပ်မှုများ။ ဤရွေ့ကားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွဲသုံးယခင်လေ့လာမှုများ၏သူတို့အားဆင်တူ t အုပ်စုတစုအတွင်း preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်ပြောင်းလဲမှုများဆုံးဖြတ်ရန်စမ်းသပ်မှု (6, 38-43) ။ တစ်ပြင်အခန်းများအတွက်မည်သည့်ကနဦးဦးစားပေးတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့အအခန်းများမှထပ်ခါတလဲလဲညီမျှထိတွေ့မှုအပြီးလျှော့ချနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အပြင်, ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြွင်းချက်မရှိပြောင်းလဲမှုများကိုအဘို့အဆုံး (မှားယွင်းသောအပြုသဘောရလာဒ်များ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့ကျစေပါတယ်6, 7) ။ နှစ်ဦးစလုံး preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုတစ် CPP ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု3အတွက်ဇီဝကမ္မ variable တွေကိုအပေါ် haloperidol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်, နမူနာတွဲ t စမ်းသပ်မှုများအသီးအသီး haloperidol ထိုးအုပ်စုတစ်စုအတွင်း, အ haloperidol- နှင့်မော်တော်ယာဉ်-တွဲအခန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် fecal boli output ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ dopamine အဲဒီ receptor ရန် haloperidol နှင့်တကွ, စမ်းသပ်မှု4အတွက် VS မှ ANOVA ဆွဲဆောင်မှုရမှတ်အပေါ် haloperidol ထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခြွင်းချက်မရှိဆွဲဆောင်မှုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ t စမ်းသပ်မှုမှာအောက်ပါအတိုင်း-ups နှင့် Bonferroni ပြင်ဆင်ချက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 1-နမူနာ t စမ်းသပ်မှုအုပ်စုတစ်ခုစီ၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များသည်အခွင့်အလမ်း၊ တစ်ဝက်သို့မဟုတ်သုညနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားမှုရှိ / မရှိကိုစစ်ဆေးရန်စမ်းသပ်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးနေ့၌ယာဉ်ထိုးခြင်းမှတိုင်းတာမှုများသည်ကွဲပြားမှု မရှိ၍ တိရိစ္ဆာန်တစ်စုလျှင်အတူတကွပျမ်းမျှအားဖြင့်ရှိသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ထားသော ANOVA သည်မျဉ်းကြောင်းဖြတ်ခြင်း၏အရေအတွက်အပေါ်မူးယစ်ဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားလုံးအတွက် P <.05 ကိုသိသာထင်ရှားသည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းအားလုံးကို SPSS ဆော့ဝဲလ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (PASW Statistics 20; SPSS, An IBM Company, Chicago, Illinois) ။
ရေရှည် GDX အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟမ်းစတား (VS များအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းရန်ပျက်ကွက်ပုံ 1) ။ အဆိုပါ GDX +0အုပ်စု preference ကိုသို့မဟုတ်ခြားနားချက်ရမှတ်အတွက်အပြောင်းအလဲမရှိပါ 1-နမူနာအဖြစ်, VS နှင့်အတူအေးစက်၏ရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှု preference ကိုအတွက်မတညျ့ပြောင်းလဲမှု (ကွောငျးဖျောပွခဲ့t(9) = -1.98, NS) သို့မဟုတ်ခြားနားချက် (t(9) = 1.19, NS) ရမှတ်သုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, GDX + T ကိုအုပျစု 1-လမ်းအဖြစ်, VS တစ် CPP ကတငျပွခဲ့ t စမ်းသပ်မှု preference ကိုအတွက်တညျ့ပြောင်းလဲမှု (ကွောငျးဖျောပွခဲ့t(9) = 4.06, P <.01) နှင့်ခြားနားချက် (t(9) = -4.23, P <.01) ရမှတ်များသုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည် အုပ်စုများသည်၎င်းတို့၏ကန ဦး preference ရမှတ်တွင်ကွာခြားမှုမရှိပါ (F(2,29) = 2.17, NS) သို့မဟုတ်ခြားနားချက်ရမှတ် (F(2,29) = 1.95, NS) ။ ထို့ကြောင့်, testicular ဟော်မုန်းမှမကြာသေးမီထိတွေ့ VS-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီဘို့လိုအပ်ပေသည်။
ဟော်မုန်း-ကြိုးကိုင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟမ်းစတားအတွက်အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက် (VS) မှ conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ။ preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များအတွက်တညျ့အပြောင်းအလဲများပြနေကြတယ်, ±အရှေ့တောင်ဆိုလို။ * အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု (သုည) မှခြားနားချက်ညွှန်ပြ, P <.05 ။ ရေရှည် ...
စမ်းသပ်မှု 2: လူငယ်ဟမ်းစတားအတွက် VS မှချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်လိုအပ်သော Testosterone နဲ့ dopamine အဲဒီ receptor activation ရှိပါသလား
testosterone (လူငယ်ဟမ်းစတားအတွက် VS များအတွက် CPP ကမြှင့်တင်လုံလောက်ခဲ့တယ်ပုံ 2) ။ မော်တော်ယာဉ်ဆေးထိုးခံသောအဆိုပါ GDX + T ကို VS အုပ်စုတစ်စု 1-လမ်းအဖြစ်, VS တစ် CPP ကပြသ t စမ်းသပ်မှု preference ကိုအတွက်တညျ့ပြောင်းလဲမှု (တွေ့ရှိခဲ့t(5) = 3.11, P <.05) နှင့်ခြားနားချက် (t(5) = -2.77, P <.05) ရမှတ်များသုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည် GDX +0VS အုပ်စုသည်အေးစက်မှုကြောင့်ရလဒ်များနှင့်ကွဲပြားမှုရမှတ်များသိသိသာသာတည့်မတ်သောပြောင်းလဲမှုမပြပါ (t(6) = 0.09 [NS] နှင့် t(6) = -1.74 [NS] အသီးသီး), ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့အလားတူပြင်းအားနှင့်အတူ gonad-နဂိုအတိုင်း Juvenile တွင်တွေ့မြင်သက်ရောက်မှုပုံတူ (7) ။ ထို့အပြင် dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (ကို T-ကုသလူငယ်ဟမ်းစတားအတွက် VS များအတွက် CPP ကပိတ်ဆို့ပုံ 2) ။ အဆိုပါ CPP ကအားလုံး3ဆေးများမှာ haloperidol ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်: အ 0.05-, 0.15- နှင့် 0.45-mg / kg GDX + T ကို VS အုပ်စုများ (preference ကိုရမှတ်များအတွက်တညျ့အပြောင်းအလဲများကိုမပြခဲ့ပါဘူးt(7) = 0.35 [NS] t(6) = 0.52 [NS] နှင့် t(7) = -0.10 [NS] အသီးသီး) သို့မဟုတ်ခြားနားချက်ရမှတ် (t(7) = -0.44 [NS] t(6) = -0.18 [NS] နှင့် t(7) အေးစက်၏ရလဒ်အဖြစ်သုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုအသီးသီး = 0.31 [NS]) ။ အုပ်စုများ (၎င်းတို့၏ကနဦး preference ကိုရမှတ်အတွက်ကွဲပြားဘူးF(5,47) = 0.27, NS) သို့မဟုတ်ခြားနားချက်ရမှတ် (F(5,47) = 0.26, NS) ။
ဟိုမုန်းနှင့် dopamine-ကြိုးကိုင်လူငယ်ဟမ်းစတားအတွက်အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက် (VS) မှ conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ။ preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များအတွက်တညျ့အပြောင်းအလဲများပြနေကြတယ်, ±အရှေ့တောင်ဆိုလို။ * အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု (သုည) မှခြားနားချက်ညွှန်ပြ, P < ...
haloperidol ၏အောက်ပိုင်း2ဆေးများဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည် (ပုံ 3) ။ အဆိုပါ 0.05 မဟုတ်သလို 0.15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်အုပ်စုတစ်စု 1-လမ်းအဖြစ်, haloperidol မှတကြ် CPA ပြသခဲ့သည်ကိုလည်းမ t စမ်းသပ်မှု preference ကိုအတွက်မတညျ့ပြောင်းလဲမှု (ကွောငျးဖျောပွခဲ့t(7) = -0.23 [NS] နှင့် t(8) = 0.55 [NS] အသီးသီး) မဟုတ်သလိုခြားနားချက် (t(7) = -0.02 [NS] နှင့် t(9) = -0.54 [NS] အသီးသီး) ရမှတ်သုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ haloperidol ၏အမြင့်ဆုံးထိုးဖို့တကြ် CPA ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တလမ်းတည်း t စမ်းသပ်မှုများ (preference ကိုရမှတ်အတွက်တညျ့ပြောင်းလဲမှုသုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုပြသt(7) = 2.55, P <.05), ဒါပေမယ့်ခြားနားချက်ရမှတ်အတွက်တညျ့ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ခဲ့ (t(7) = -1.88, NS) ။ အုပ်စုများ (၎င်းတို့၏ကနဦး preference ကိုရမှတ်အတွက်ကွဲပြားဘူးF(3,32) = 0.01, NS) သို့မဟုတ်ခြားနားချက်ရမှတ် (F(3,32) = 0.14, NS) ။ Haloperidol (fecal boli ၏ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့နံပါတ်ပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပုံ 4) ။ တွဲနမူနာ t စမ်းသပ်မှုလှုပ်ရှားမှု 0.00- မှာ haloperidol အားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့သရုပ်ပြ, 0.05-, 0.15-, ဒါမှမဟုတ် 0.45-mg / kg ဆေးများ (t(8) = -0.26 [NS] t(8) = 0.28 [NS] t(8) = 0.26 [NS] နှင့် t(8) = 1.21 [NS] အသီးသီး) ။ Fecal boli output ကိုကို (0.45-mg / kg အထိုးမှာတိုးပွားလာခဲ့သည်t(8) = -2.67, P <.05), ဒါပေမယ့် 0.00-, 0.05-, ဒါမှမဟုတ် 0.15-mg / kg ဆေးများမှာမရ (t(8) = -1.10 [NS] t(8) = -0.59 [NS] နှင့် t(8) = -1.74 [NS] အသီးသီး) ။
testosterone ဟော်မုန်း-ကြိုးကိုင်လူငယ်ဟမ်းစတားအတွက်မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် haloperidol 0.45 မှတကြ် CPA ။ preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များအတွက်တညျ့အပြောင်းအလဲများပြနေကြသည်; ±အရှေ့တောင်ဆိုလို။ * အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု (သုည) မှခြားနားချက်ညွှန်ပြ, P <.05 ။ dopamine ၏2နိမ့်ဆေးများ ...
လပ်ြရြားမြ (ထိပ်) နှင့် vehicle- နှင့် haloperidol-တွဲအခန်းကြွက်၏ fecal boli output ကို (အောက်ခြေ), ±အရှေ့တောင်ဆိုလို။ * တိရစ္ဆာန်အတွင်းထရံအခန်းတို့သည်အကြားခြားနားချက်များကိုညွှန်ပြ, P <.05 ။ Haloperidol သည်လှုပ်ရှားမှုကိုမထိခိုက်သော်လည်းတိုးပွားစေသည် ...
တစ်ဦးထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ VS မှဆွဲဆောင်မှုထိခိုက် Dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (ပုံ 5) ။ ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်ထိုးတဲ့သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဖန်လုံအိမ်-Geisser ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုရမှတ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် F(1.42,11.38) = 9.802, P <.01, နောက်ဆက်တွဲအတွက်ထိုကဲ့သို့သော t စမ်းသပ်မှုများ, ယာဉ်ရမှတ် 0.05-, 0.15- ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်, 0.45-မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် (ရမှတ်ထိုးt(8) = -4.74, -3.46 နှင့် -3.80 အပေါင်းတို့, P <.01, အသီးသီး) ။ သို့သော် ၁- နမူနာ t စစ်ဆေးမှုများမှကွာခြားချက်ရမှတ်များကို slide များ (သုည) အကြားအခွင့်အလမ်း ဦး စားပေးနှိုင်းယှဉ်မှုအရ VS ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းသည် 1-mg / kg အုပ်စုတွင်၊ အုပ်စုအုပ်စု၌ရှိသကဲ့သို့ - 0.15- နှင့် 0.00- мг / ကီလိုဂရမ်ထိုးဆွဲဆောင်မှုရမှတ်များအခွင့်အလမ်းနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည်t(8) = 4.22, P <.01 နှင့် t(8) = 2.81, P <.05, အသီးသီး), 0.05- နှင့် 0.45-mg / kg ထိုးရမှတ်များအခွင့်အလမ်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြဘူးသော်လည်းt(8) အသီးသီး = 1.72 နှင့် -0.11, နှစ်ဦးစလုံး NS,) ။ ထိုး၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA (နေဖြင့်လိုင်းဖြတ်အရေအတွက်အပေါ်တွေ့ရှိခဲ့သည်F(3,24) = 0.11, NS), ဒေတာမပြပါ။ ထို့ကြောင့် haloperidol သိသိသာသာအချို့သောဆေးများမှာ VS မှဆွဲဆောင်မှုလျှော့ချ။
ဆွဲဆောင်မှု±အရှေ့တောင်ဆိုလို, haloperidol-ကုသဟမ်းစတားအတွက်အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက် (VS) မှဂိုးသွင်း။ # မော်တော်ယာဉ်များထံမှခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ * အဘယ်သူမျှမ preference ကို (သုည) မှခြားနားချက်ညွှန်ပြ, P <.05 ။ Haloperidol အားလုံးဆေးများမှာ VS မှဆွဲဆောင်မှုလျှော့ချပေမယ့် ...
ဇီဝကမ္မအစီအမံမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 1 နှစ်ခုစလုံးအသက်အရွယ်အတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်အတွက် testosterone ဟော်မုန်းတောင့များ၏ထိရောက်မှုအတည်ပြုပါ။ တူညီတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုများခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ဒီလေ့လာမှုတွေအကြိုးအဖြစ်မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့ chemosensory လှုံ့ဆော်မှုများ၏အမြင် testosterone ဟော်မုန်းမှီခိုသည်နှင့် dopamine receptors ၏ activation ပါဝငျကွောငျးဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အထူးသကျနော်တို့ Juvenile ၏ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှု vs. တစ် CPP ကဖွဲ့စည်းရန်သူတို့ကို enable လုပ်ဖို့လုံလောက်သော်လည်းရေရှည် GDX အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးဟမ်းစတား, VS တစ် CPP ကဖွဲ့စည်းမတွေ့ရှိရ ထို့အပြင်အဓိကအား D2 အဲဒီ receptor ရန် haloperidol testosterone ဟော်မုန်း-ကုသလူငယ်ဟမ်းစတားအတွက် VS တစ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏စကားရပ်တားဆီး။ ကျနော်တို့လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးရငျ့အကြောင်း, dopaminergic ဆားကစ်ပေါ်မှာသေးအမည်မသိသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, အကြိုးအဖြစ်သူတို့အားလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်အမျိုးသမီး chemosensory လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏အမြင်များတွင်ရလဒ်များကနေတဆင့် testosterone ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက် pubertal တိုး၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်ဤတွေ့ရှိချက်များအနေဖြင့်အခြ။
လူကြီးအတွက် VS ဆုလာဘ်အတွက် testosterone ဟော်မုန်းများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လူငယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ် VS မြှင့်တင်ရန် testosterone ဟော်မုန်း၏စွမ်းရည်ကိုပေးထားကျနော်တို့ VS မှ 1) ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဲ့သို့ကြိုးတုံ့ပြန်မှုကြောင့် pubertal testosterone ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်တိုးနှင့်2၏ပုံမှန်အကြောင်းကိုလာ surmise ) အဘယ်သူမျှမကအခြားဟော်မုန်း-မှီခိုသို့မဟုတ် -independent ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ VS အကျိုးသည်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း gonadal ဟော်မုန်းဆုံးရှုံးနှင့်လူကြီးအတွက် testosterone ဟော်မုန်းနဲ့ကုသ VS ဖို့ခိုင်မာတဲ့ CPP ကပြသအဖြစ်အမှန်စင်စစ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှု (VS အကျိုးသည်မလိုအပ်ပါ35) ။ VS CPP ကမှန်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ Juvenile နှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် VS မှဆွဲဆောင်မှု၏လေ့လာမှုများနှင့်သာမန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပြုအမူတွေတွင်တွေ့မြင်သူတို့အား (5, 9, 44) ။ testosterone ဟော်မုန်း VS မှဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောယန္တရားအထူးသဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေပေမယ့်ကျနော်တို့က D2 အဲဒီ receptor activation မှတဆင့် dopaminergic သေံအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းတင်ပြသည်။
အဆိုပါအဓိကအား D2 အဲဒီ receptor ရန် haloperidol vs. ဖို့ CPP ကပိတ်ဆို့အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု, VS ၏အကြိုးအနက်အတွက် D2 အဲဒီ receptor activation များအတွက်အခန်းကဏ္ဍပြ ဤသည်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုချွင်းချက်မရှိဆွဲဆောင်မှုစမ်းသပ်မှုများကသရုပ်ပြအဖြစ်, VS များ၏ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများတစ်လျှော့ချမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအဆိုးကျိုးများသီအိုရီအ olfactory အစွမ်းအစ၌တစ်ဦး haloperidol-သွေးဆောင်လျှော့ချဖို့တွေကပေါ်ကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့် (45), D2 အဲဒီ receptor activation ယခင်က (olfactory sensitivity ကိုနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုလျော့ချဖို့ပြသထားသည်46-48) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လေယာဉ်မှူးလေ့လာမှုများအတွက် haloperidol ၏အမြင့်ဆုံးထိုးပင်ထိတွေ့ဟမ်းစတားနေဆဲအစားအစာ olfactory တွေကို detect လုပ်ဖို့အလွယ်တကူနိုင်ခဲ့ကြတယ် (49) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ပိတ်ဆို့စမ်းသပ်မှု3haloperidol,2နှင့် 0.05 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၏ 0.15 နိမ့်ဆေးများကြောင့်သရုပ်ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တို့သည် haloperidol-ဆက်စပ် CPP ကအခန်းကိုရှောင်ကြဉ်စေကြောင်း haloperidol ၏ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများဖို့တွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ခဲ့, ဆန္ဒရှိကြဘူး။ ထို့အပြင် haloperidol သာအမြင့်ဆုံးထိုးမှာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ထိခိုက်နစ်နာ fecal boli output ကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ fecal boli output ကိုဂန္ထဝင်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ခြင်းကိုမနှစ်သက် (တစ်ဦးညွှန်ပြချက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသောကြောင့်50တဦးတည်းအတွက်အသိပေးချက် D2 အဲဒီ receptor activation (ထို Enter ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းအူ Motilal ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်) ဤတွေ့ရှိချက်များ, haloperidol ၏အမြင့်ဆုံးထိုးဖို့တကြ် CPA ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူအပြိုင်၌ရှိကြ၏51) ။ အတူတူယူပါက haloperidol VS ၏အာရုံခံထောက်လှမ်းနှင့်အတူဒါမှမဟုတ်ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အနိမ့်ဆေးများမှာဆန္ဒရှိနှင့်အလိုလိုကြောင်းဝငျရောကျစှကျကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်၏ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ D2 အဲဒီ receptor activation ကြိုးအဖြစ်ကိုရိပ်မိခံရဖို့ VS လိုအပ်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။
Dopamine ယခင်က (anticipatory သို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေအပါအဝင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမျိုးစုံကိုရှုထောင့်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး52), copulatory သို့မဟုတ်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူတွေ (53), နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဖို့အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု (23) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, D2 receptors မှာ dopaminergic အရေးယူဖွယ်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အခြားတွေကိုနှင့်အတူ sociosexual လှုံ့ဆော်မှုပေါင်းသင်းဘို့အရေးကြီးပါသည်။ အမျိုးသမီးကြွက်တစ် nonspecific dopamine ရန်ဘလောက် conditional အိမ်ထောင်ဖက် preference ကို၏စနစ်နိမ့်ဆေးများ (54), နှင့်တစ်ဦးရနံ့လိင်တူချင်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူတွဲပြီးနေစဉ်အတွင်းတစ် D2 agonist အထီးကြွက်များတွင်အလားတူဆှတျဖနျြးယောက်ျားတစ်လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကို induces (55) ။ စနစ်တကျ D2 ၏ထိုး, ဒါပေမယ့်မရ D2, အဲဒီ receptor agonist နှင့်ရန်အထီး voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်နှောင့်အယှက်အဖြစ် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အလုပ်နောက်ထပ် (အသီးသီး, လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပေါင်းသင်းအတွက် D1 အဲဒီ receptor ၏အရေးပါမှုကိုထောကျပံ့56) ။ လက်ရှိလေ့လာမှု (လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခြွင်းချက်မရှိလူမှုရေးတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်အတွက် D2 အဲဒီ receptor activation များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်နှင့်မူလတန်းအမျိုးသမီးအမြင်အာရုံ, အာရုံများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုလျှော့ချအတွက် haloperidol ၏သက်ရောက်မှုမှုနဲ့အပြိုင်နှင့်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးကြွက်များတွင် chemosensory တွေကို57).
ကျနော်တို့က amygdala, MPOA နှင့် Acb အပါအဝင်မျိုးစုံ dopamine-အထိခိုက်မခံဦးနှောက်ဒေသများ, VS မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုတွေ့ပြီသောကြောင့်7, 18), စနစ်တကျဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်အများအပြားကို putative က်ဘ်ဆိုက်များမှာ dopamine receptors ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ dopamine ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ဆိုဒ် (s) ကိုဒီလေ့လာမှုကနေဆုံးဖြတ်ထားမရနိုငျသျောလညျးအများအပြားဖွယ်ရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှိပါတယ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်အသီးသီး MPOA သို့ Dopamine agonists နှင့်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်လွယ်ကူချောမွေ့နှင့်လျှော့ချဖို့,, (58-61) ။ ထို့အပြင် MPOA (anticipatory လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဦးစားပေးများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကို62, 63) ။ အဆိုပါ mesolimbic စနစ် (ယေဘုယျမော်တာစွမ်းရည် မှလွဲ. copulatory အပြုအမူတွေများ၏စွမ်းဆောင်ရည်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့မထင်ထားဘူး63, 64) ။ သို့သော် Acb အတွက် dopaminergic အရေးယူမှု (မော်တာသက်ရောက်မှု၏လွတ်လပ်သော, ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတွေကိုတုန့်ပြန်တိုးလာ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိုက်ထူအဖြစ်, anticipatory လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ62, 65) ။ ထို့အပြင် Acb (voles အတွက်အလုပ်အားဖြင့်သက်သေအဖြစ်, pair တစုံဘွန်းနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်-cue အသင်းအဖွဲ့အတွက်အရေးပါသည်66, 67) ။ ထို့ကြောင့် MPOA, Acb, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးဒေသများတွင် dopamine အရေးယူ vs. မှချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်
dopaminergic စနစ်များ testosterone မော်ဂျူ
ယခင်သုတေသန (အပျိုဖော်ဝင်-related dopamine အကြောင်းအရာအတွက်အပြောင်းအလဲများကို, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, receptors, နှင့် Acb အတွက် Synaptic တုံ့ပြန်မှုပြ68-73) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများ testosterone ဟော်မုန်းအတွက် pubertal မြင့်တက် Acb (gonadal ဟော်မုန်း၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်း၏လွတ်လပ်စွာဖြစ်ပေါ်ကြွက်များတွင်ကနဦး overproduction နှင့် D1 နှင့် D2 receptors ၏နောက်ဆက်တွဲတံစဉ်များကိုများ၏ဆယ်ကျော်သက်ပုံစံသောမှတ်သားလောက်သောချွင်းချက်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့ရသေးအပေါ်မှီခိုရှိမရှိ74) ။ MPOA dopamine အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကောင်းမွန်စွာလေ့လာခဲ့ကြပြီဖြစ်သော်လည်း (75), လျော့နည်းယောက်ျား MPOA အတွက် dopaminergic သေံအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ သို့သော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ MPOA ၏ဟော်မုန်း sensitivity ကိုကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများတစ်ရှူးအကြောင်းအရာနှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပါအဝင် MPOA အတွက် dopaminergic သေံအတော်ကြာအတိုင်းအတာတစ်ခုတိုး, ဒါပေမယ့်ကြွင်းသောအရာမှာကြွက်များတွင် extracellular dopamine အတွက်လျော့နည်း (ထဲမှာရေရှည် (2-8 wk) gonadectomy ရလဒ်များကိုသရုပ်ပြပါပြီ27, 76-79) ။ အရေးကြီးတာက, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုမှ MPOA dopaminergic တုံ့ပြန်မှုအလားတူ (testosterone ဟော်မုန်းအားဖြင့် modulated နေကြတယ်11, 28) ။ အဆိုပါ ventral striatum အတွက်သင်း၏သက်ရောက်မှုများ MPOA အတွက်သူများထက်လျော့နည်းတသမတ်တည်းကွသျောလညျး 28 ဃ gonadectomy ယေဘုယျအားဖြင့် (Acb တစ်ရှူးအတွက် dopamine နဲ့ DOPAC ပြင်းအားလျော့နည်းစေ27, 80, 81) ။ ထို့ကြောင့်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်စံတန်ဖိုးတိုးအားဖြင့် VS ဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်, MPOA, Acb အတွက် VS တုံ့ပြန် dopaminergic လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးပါတယ်။ ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် သို့သော် (ဤလေ့လာမှုအများအပြားအရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်များနှင့်လူငယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် testosterone ဟော်မုန်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုလူကြီးများအတွက်သူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုပြီးအလုပ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၌ဤယူဆချက်ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်34).
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများအနေနဲ့ခြွင်းချက်မရှိလူမှုရေးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှအကြိုးတုံ့ပြန်မှုအတွက် Testosterone နဲ့ dopamine ၏အရေးပါမှုကိုသရုပ်ပြပါ။ နှစ်ဦးစလုံး Testosterone နဲ့ dopamine စနစ်များ VS ၏အကြိုးအရည်အသွေးကိုပုံမှန်အားဝယ်ယူသောအခါမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းရင့်ကျက်။ ဒါဟာ dopaminergic circuit ကို VS မှ CPP ကပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လူငယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တချို့သည်အခြားအာရုံကြော circuitry ၏ testosterone ဟော်မုန်း-မှီခို activation VS အကျိုးသည်လည်းလိုအပ်ပေသည်။ သို့သော်ထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားပေးထားအရှိဆုံး parsimonious ရှင်းပြချက်, လူငယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုအလှည့်အတွက် VS ဆုလာဘ်ခွင့်ပေးဖို့ dopaminergic system ကိုထိခိုက် pubertal testosterone ဟော်မုန်းအတွက်စံတန်ဖိုးမြင့်, အတုယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
စာရေးဆရာများသည် CPP ကိုကူညီရာတွင်နာရီပေါင်းများစွာ Jane Venier၊ Andrew Kneynsberg၊ Elaine Sinclair, Susie Sonnenschein, Joshua Paasewe, Jennifer Lampen နှင့် Shannon O'Connell တို့ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်စာရေးသူများသည်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် Kayla De Lorme နှင့် Maggie Mohr တို့၏ရေးသားချက်များအပေါ်များစွာအထောက်အကူပြုသောတုံ့ပြန်ချက်များကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes R01-MH068764 (CS မှ), (ကို MB မှ) T32-MH070343, နှင့် (ကို MB မှ) T32-NS44928 ပေးအပ်ကထောက်ခံခဲ့သည်။
အေးစက်သောအရပ် preference ကို
medial preoptic ဧရိယာ
အင်္ဂါဇာတ် Secret ။
1 ။ Murphy က MR, Schneider GE ။ Olfactory မီးသီးဖယ်ရှားရေးယောက်ျားရွှေဟမ်းစတားအတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူရှင်းလင်းစေပါတယ်။ သိပ္ပံ။ 1970; 167: 302-304 [PubMed]
2 ။ ဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှု၏ Petrulis အေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ (Mesocricetus auratus) ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2009; 200: 260-267 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ နှိမ့်ချ LR, Romeo RD, Novak CM, Sisk CL ။ prepubertal နှင့် postpubertal အထီးဟမ်းစတားအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များ: မျိုးဆက်ပွားအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများ dissociation နှင့်ဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor immunoreactivity ။ Horm ပြုမူနေ။ 1997; 31: 75-88 [PubMed]
4 ။ Romeo RD, Parfitt DB, ရစ်ချတ်ဆန် HN, Sisk CL ။ pheromones prepubertal နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက် Fos-immunoreactivity ၏ညီမျှသောအဆင့်ဆင့်ထုတ်ယူ။ Horm ပြုမူနေ။ 1998; 34: 48-55 [PubMed]
5 ။ Johnston RE, အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ရွှေကြွက်အခြားတ္ထုများမှတုံ့ပြန်မှု၏ Coplin ခဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Biol ပြုမူနေ။ 1979; 25: 473-489 [PubMed]
6 ။ ခေါင်းလောင်း MR, Meerts SH, Sisk CL ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို chemosensory လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကိုသရုပ်ပြပါ။ Horm ပြုမူနေ။ 2010; 58: 410-414 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ ခေါင်းလောင်း MR, De Lorme KC, Figueira RJ, Kashy DA, Sisk CL ။ တစ်ဦးလူမှုရေးအရသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြုသဘောဆောင် valence အတွက် 2012 ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အမြတ်: အ mesocorticolimbic ဆုလာဘ် circuitry ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။ EUR J ကို neuroscience ။ 2012 ။ Doi: 10.1111 / ejn12058 [PubMed]
8 ။ ဂရက်ဂိုရီ Eh, ရွှေကြွက်များတွင် olfactory-guided အပြုအမူ၏ဘိရှော့ပ်ကအေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1975; 15: 373-376 [PubMed]
9 ။ Whalen RE, DeBold JF ။ အဆိုပါ castrated အထီးဟမ်းစတားအတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်အတွက် testosterone ဟော်မုန်း, androstenedione နှင့် dihydrotestosterone ၏နှိုင်းယှဉ်ထိရောက်မှု။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1974; 95: 1674-1679 [PubMed]
10 ။ Malmnas CO ။ အဆိုပါ castrated အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ L-dopa သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအခြား catecholamines နှိုင်းယှဉ် dopamine များ၏အရေးပါမှု, ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1976; 4: 521-526 [PubMed]
11 ။ Hull က EM, ဒူ J ကို, Lorraine DS, အ medial preoptic ဧရိယာ၌ Matuszewich အယ်လ် Extracellular dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 7465-7471 [PubMed]
12 ။ Pfaus JG, Damsma, G, Nomikos GG, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 530: 345-348 [PubMed]
13 ။ Damsma, G, Pfaus JG, Wenkstern: D, Phillips က AG က, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွါး: အသစ်အဆန်းများနှင့်ရွေ့လျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1992; 106: 181-191 [PubMed]
14 ။ အတွက် Vivo voltammetry ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ် Mas M က, Gonzalez-Mora JL, Louilot တစ်ဦး, တစ်ဦးတည်းသောကို C, Guadalupe တီအထီးကြွက် copulating ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်။ neuroscience လက်တ။ 1990; 110: 303-308 [PubMed]
15 ။ Meisel RL, စခန်း DM, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း ventral striatal dopamine တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1993; 55: 151-157 [PubMed]
16 ။ Mitchell က JB, အဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်၏ activation အားဖြင့်ရူးနှမ်း Gratton အေ Mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ်မြန်နှုန်းမြင့် chronoamperometric လေ့လာမှု။ neuroscience လက်တ။ 1992; 140: 81-84 [PubMed]
17 ။ Louilot တစ်ဦးက, Gonzalez-Mora JL, Guadalupe T က, Mas အမ်လိင်-related olfactory လှုံ့ဆော်မှုအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရွေးချယ်တိုးသွေးဆောင်။ တစ်ဦးက voltammetric လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 553: 313-317 [PubMed]
18 ။ Schulz KM ရစ်ချတ်ဆင် HN, Romeo RD, မောရစ်ဂျာ Lookingland KJ, Sisk CL ။ အမျိုးသမီး pheromones မှ Medial preoptic ဧရိယာ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုယောက်ျားဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဖွံ့ဖြိုး။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 988: 139-145 [PubMed]
19 ။ Wenkstern: D, Pfaus JG, Fibiger HC ။ လိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်မှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် Dopamine ဂီယာတိုး။ ဦးနှောက် Res ။ 1993; 618: 41-46 [PubMed]
20 ။ Triemstra JL, Nagatani S က, Wood က RI က။ Chemosensory တွေကိုအထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ MPOA အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1436-1442 [PubMed]
21 ။ ဇျနာရီ, သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း Ettenberg အေ Haloperidol စိန်ခေါ်မှုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲတိုးကာကွယ်ပေးသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 67: 387-393 [PubMed]
22 ။ ဇျနာရီ, Ettenberg အေလိင်အေးစက်မက်လုံးပေး: dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းစဉ်အတွင်းစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများကို attenuation ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002; 72: 65-72 [PubMed]
23 ။ Meisel RL, ယုပ္ပေနေ MA, ရိုဝီက RK ။ Dopamine အဲဒီ receptor ရန်အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါ conditional ရာအရပျ preference ကို attenuate ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1996; 309: 21-24 [PubMed]
24 ။ အစ္စမေးလ် N ကို, Girard-Bériaultက F, Nakanishi S က, Pfaus JG ။ Naloxone, ဒါပေမယ့်မရ flupenthixol, ယောက်ျားကြွက်များတွင် conditional ejaculatory preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု disrupts ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2009; 123: 992-999 [PubMed]
25 ။ Agustín-အဲဒီ့ကို C, Martinez-Rico J ကို, Martinez-Garcia က F, dopaminergic မူးယစ်ဆေး Lanuza အီးအကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ပင် pheromones-mediated ဆုလာဘ်အပေါ်: '။ အကြိုက်' 'dopamine-လွတ်လပ်သော၏အသစ်အမှု ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007; 121: 920-932 [PubMed]
26 ။ Agmo တစ်ဦးကယင်းအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့် Berenfeld R. : opioids နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1990; 104: 177-182 [PubMed]
27 ။ Mitchell က JB, သင်း, Steroid တစ်မျိုးအစားထိုးခြင်း, mesolimbic dopamine နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ Stewart ကဂျေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1989; 491: 116-127 [PubMed]
28 ။ Putnam SK ကို, ဒူ J ကို, Sato က S, Hull က EM ။ copulatory အပြုအမူ၏ testosterone ပွနျလညျထူထောငျ castrated အထီးကြွက်များတွင် medial preoptic dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 39: 216-224 [PubMed]
29 ။ Scaletta ll, Hull က EM ။ စနစ်သို့မဟုတ် intracranial apomorphine ရေရှည် castrated အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိတိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 37: 471-475 [PubMed]
30 ။ Ernst M က, Romeo RD, Andersen က SL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Neurobiology: တစ်အာရုံကြောစနစ်များမော်ဒယ်သို့ပြတင်းပေါက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009; 93: 199-211 [PubMed]
31 ။ Miller က ll, Whitsett JM, Vandenbergh JG, Colby DR ။ အထီးရွှေကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့၏ရုပ်ပိုင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရှုထောင့်။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1977; 91: 245-259 [PubMed]
32 ။ ခေါင်းလောင်း MR, De Lorme KC, Meerts SH, Sisk CL ။ testosterone-ကုသလူငယ်အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု conditional ရာအရပျ preference ကိုပြသပါ။ Program ကိုအရေအတွက်အား 819.02 ။ 2011 အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး Planner ကဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံ, 2011 များအတွက် Society က
33 ။ Hull က EM, Dominguez JM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007; 52: 45-55 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Schulz KM, Zehr JL, sala-Ramirez KY, Sisk CL ။ testosterone အစီအစဉ်များလူမှုရေးအပြုအမူမီနှင့်ကာလအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ဒါပေမယ့်မရပြီးနောက်, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2009; 150: 3690-3698 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ de Lorme KC, ဘဲလ် MR, Sisk CL ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လူမှုရေးဆုလာဘ်များရင့်ကျက် pubertal testosterone ဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်မထားဘူး။ Horm ပြုမူနေ။ 2012; 62: 180-185 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Johnston RE, Peng ကအမ်အဆိုပါ vomeronasal ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုရွှေကြွက်များတွင်အမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းအနံ့၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပေမယ့်မပေးပါ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2000; 70: 537-549 [PubMed]
37 ။ အင်အားကြီး JB, Bergondy ML ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင် chemoinvestigatory အပြုအမူတွေ၏အန်ဒရိုဂျင်စည်းမျဉ်း။ Horm ပြုမူနေ။ 1983; 17: 28-44 [PubMed]
38 ။ မာတီနက်စ်၏ငါသိပ်မရှိပါဘူး RG ။ သာ Self-ပွေးညီမိတ်လိုက်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏ကြွက်များတွင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40: 510-517 [PubMed]
39 ။ Meisel RL, ယုပ္ပေနေ MA ။ ပြင်းထန်တဲ့သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအောက်ပါအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး။ Physiol ပြုမူနေ။ 1994; 56: 1115-1118 [PubMed]
40 ။ Kohlert JG, Olexa N. အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏ဝယ်ယူဘို့အင်္ဂါဇာတ်ဆွများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 84: 135-139 [PubMed]
41 ။ Meerts SH, Clark က AS ။ အမျိုးသမီးကြွက် nonpaced မိတ်လိုက်များအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကိုပြ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007; 51: 89-94 [PubMed]
42 ။ Parada M က, Chamas L ကို, Censi S က, Coria-Avila, G, Pfaus JG ။ Clitoral ဆွကြွက်အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးများနှင့် Fos activation ဖြစ်ပေါ်သည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2010; 57: 112-118 [PubMed]
43 ။ Tenk CM, Wilson က H ကို, Zhang ကမေး, အိုး KK, Coolen LM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2009; 55: 93-97 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ ဂရက်ဂိုရီအီး, အိန်ဂျယ် K ကိုအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအင်္ဂါဇာတ်ရိနာစွဲအနံ့များအတွက် Pfaff ဃအမျိုးသားဟမ်းစတား preference ကို: အတွေ့အကြုံနှင့်ဟော်မုန်းပြဋ္ဌာန်းလေ့လာမှုများ။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1975; 89: 442-446 [PubMed]
45 ။ ဂူ JW, အ forebrain အတွက် Baker အိပ်ချ် Dopamine စနစ်များကို။ Adv Exp Med Biol ။ 2009; 651: 15-35 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ Doty RL, Risser JM ။ spiperone အုပ်ချုပ်ရေးမီနှင့်အပြီးကြွက်များ၏အနံ့ထောက်လှမ်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် D-2 dopamine အဲဒီ receptor agonist quinpirole ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Psychopharmacology ။ 1989; 98: 310-315 [PubMed]
47 ။ မိတ်လိုက် olfaction ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်နှင့်အတူအနံ့်ရောက်စွက်ဖက်ကာကွယ်ပေးသည်ပြီးနောက် Serguera ကို C, Triaca V ကို, ကယ်လီ-Barrett J ကို, Banchaabouchi MA, Minichiello အယ်လ် dopamine တိုးမြှင့်။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 949-956 [PubMed]
48 ။ ဝေ CJ, Linster ကို C, Cleland က TA ။ Dopamine: D2 အဲဒီ receptor activation ရိပ်မိအနံ့ပြင်းထန်မှု modulates ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2006; 120: 393-400 [PubMed]
49 ။ ခေါင်းလောင်း MR, Sisk CL ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက် Dopamine-မှီခိုလူမှုရေးဆုလာဘ်။ Program ကိုနံပါတ် P1.48 ။ SBN 2012 အစီအစဉ်စာအုပ်။ Schaumburg, IL: အပြုအမူ Neuroendocrinology, 2012 များအတွက် Society က
50 ။ Sanberg PR စနစ်။ Neuroleptic-သွေးဆောင်စိတ်ခံစားမှုကျင်ကြီးစွန်: pimozide နှင့် apomorphine ၏ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1989; 46: 199-202 [PubMed]
51 ။ လီ ZS, Schmauss ကို C, ကွင်ကာမြို့တစ်ဦးက, ကလစ်ဖ်အီး, ဂေရရှုန် MD ။ Enter dopaminergic အာရုံခံနှင့် D2 အဲဒီ receptor အားဖြင့်အူလမ်းကြောင်း Motilal ၏ဇီဝကမ္မမော်ဂျူ: ရိုင်း-type အမျိုးအစားထဲမှာ dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်, တည်နေရာ, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် function ကို၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခေါက်လျက်နေ၏ထွက်ကြွက်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 2798-2807 [PubMed]
52 ။ Pfaus JG, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏သက်ရောက်မှု Differential ။ Psychopharmacology (ဘာလင်) ။ 1989; 98: 363-368 [PubMed]
53 ။ Arteaga M က, ရွှေကြွက်များ၏အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံအပေါ် yohimbine နှင့် apomorphine ၏ Motte-Lara J ကို, Velázquez-Moctezuma ဂျေအကျိုးသက်ရောက်မှု (Mesocricetus auratus) ။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2002; 12: 39-45 [PubMed]
54 ။ Coria-Avila GA, Gavrila လေး, Boulard B, Charron N ကို, Stanley, G, Pfaus JG ။ II ကို: အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် conditional မိတ်ဖက် preference ကို၏ Neurochemical အခြေခံ။ flupenthixol အားဖြင့်နှောင့်အယှက်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2008; 122: 396-406 [PubMed]
55 ။ et al Triana-Del ရီယို R ကို, Montero-Domínguezက F, Cibrian-Llanderal T က။ quinpirole ၏သက်ရောက်မှုအောက်တွင်လိင်တူချင်းတွဲပြီးယောက်ျားအတွက်, ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီးကြွက်တစ်အေးစက်လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2011; 99: 604-613 [PubMed]
56 ။ ဝမ် Z ကို, ယု, G, Cascio ကို C, လျူ Y ကို, Gingrich B, Insel TR ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113: 602-611 [PubMed]
57 ။ ဇျနာရီ, Ettenberg အေ Dopamine ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း estrous အမျိုးသမီးတွေကိုချွင်းချက်မရှိမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို attenuates ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2001; 68: 411-416 [PubMed]
58 ။ Hull က EM, Bitran: D, Pehek EA ၏, Warner RK, Band LC, ကေတီဟုမ်း GM က။ တစ်ဦး intracerebrally-ထုံမွှန်း agonist သက်ရောက်မှု: ကြွက်များတွင်အထီးလိင်အပြုအမူ၏ Dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1986; 370: 73-81 [PubMed]
59 ။ Pehek EA ၏, Warner RK, Bazzett တီဂျေ, et al ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာသို့ CIS-flupenthixol ၏ Microinjection တစ် dopamine ရန်, အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူချို့ယွင်း။ ဦးနှောက် Res ။ 1988; 443: 70-76 [PubMed]
60 ။ Bitran: D, Hull က EM, ကေတီဟုမ်း GM က, Lookingland KJ ။ preoptic incertohypothalamic dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့်အထီးကြွက် copulatory အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1988; 20: 323-331 [PubMed]
61 ။ ဂရေဟမ် MD, Pfaus JG ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine agonists အားဖြင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ differential စည်းမျဉ်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2010; 97: 284-292 [PubMed]
62 ။ Pfaus JG, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ dopamine ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1991; 105: 727-743 [PubMed]
63 ။ မောရှေသည်ဂျေ, Loucks ဂျာ Watson ဟာ HL, Matuszewich L ကို, Hull က EM ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် Dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ: မော်တာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1995; 51: 681-686 [PubMed]
64 ။ Hull က EM, Weber က MS, Eaton RC, et al ။ Dopamine ဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၌ receptors မော်တာကိုထိခိုက်ပေမယ့်မပေးအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိစိတ်ခွန်အားနိုးသို့မဟုတ် reflex, အစိတ်အပိုင်းများကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 554: 72-76 [PubMed]
65 ။ လျူ YC, Sachs bd, Salamone JD ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် radiofrequency သို့မဟုတ် dopamine-depleting ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1998; 60: 585-592 [PubMed]
66 ။ Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, et al ။ နျူကလိယ dopamine differential monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 133-139 [PubMed]
67 ။ Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster) ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 173-183 [PubMed]
68 ။ Philpot R ကို, ထပ်ခါတလဲလဲအီသနောထိတွေ့ရန် accumbal dopaminergic တုံ့ပြန် Kirstein C. Developmental ကွဲပြားခြားနားမှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1021: 422-426 [PubMed]
69 ။ Badanich Ka, Adler KJ, Kirstein CL ။ မြီးကောင်ပေါက်နျူကလီးယပ်အတွက် preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine septi accumbens ကင်းသောအခြေအနေများအရပျ၌လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2006; 550: 95-106 [PubMed]
70 ။ Philpot RM, Wecker L ကို, Kirstein CL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထပ်ခါတစ်လဲလဲအီသနောထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယကနေ dopaminergic output ကို၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း septi accumbens ပွောငျးလဲ။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2009; 27: 805-815 [PubMed]
71 ။ Coulter CL, Happe ဟောင်ကောင်, Murrin LC ။ တစ်အရေအတွက် autoradiographic လေ့လာမှု: အ dopamine ပို့ဆောင်ရေး Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1996; 92: 172-181 [PubMed]
72 ။ Andersen က SL, Rutstein M က, Benzo JM, Hostetter JC, Teicher MH ။ dopamine အဲဒီ receptor overproduction နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuroreport ။ 1997; 8: 1495-1498 [PubMed]
73. Tseng KY, O'Donnell P. D2 dopamine receptor များသည်အရွယ်ရောက်ကြွက် prefrontal cortex တွင် excitatory synaptic transmission အတွက် GABA အစိတ်အပိုင်းကိုစုဆောင်းသည်။ Synapse ။ 2007; 61: 843-850 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
74 ။ Andersen က SL, Thompson ကအေပီ, Krenzel အီး, Teicher MH ။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27: 683-691 [PubMed]
75 ။ Becú-Villalobos: D, Lacau-Mengido ထားတဲ့ IM, Díaz-Torga GS, ကြွက်များတွင် adenohypophyseal ဟော်မုန်းများ၏အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှု Libertun C. Ontogenic လေ့လာမှုများ။ II ကို။ Prolactin ။ cell Mol Neurobiol ။ 1992; 12: 1-19 [PubMed]
76 ။ အိန်ဂျယ် J ကို, Ahlenius S က, Almgren အို Carlsson တစ်ဦးက, Larsson K ကိုအထီးကြွက်များတွင်ဦးနှောက် monoamine ပေါင်းစပ်အပေါ် gonadectomy နှင့်ဟော်မုန်းအစားထိုး၏Södersten P. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1979; 10: 149-154 [PubMed]
77 ။ Simpkins JW, Kalra SP, Kalra ဆာ။ အဆိုပါ preoptic ဧရိယာနှင့် medial Basal hypothalamus အတွက်အများအပြား microdissected ဒေသများတွင် dopamine လှုပ်ရှားမှုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ variable ဆိုးကျိုးများ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1983; 112: 665-669 [PubMed]
78 ။ Gunnet JW, Lookingland KJ, Moore က Ke ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင် incertohypothalamic dopaminergic အာရုံခံအပေါ်သင်းနှင့် Steroid တစ်မျိုးအစားထိုး၏သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ Neuroendocrinology ။ 1986; 44: 269-275 [PubMed]
79 ။ du J ကို, Lorraine DS, Hull က EM ။ သင်း extracellular လျော့ကျပေမယ့် intracellular တိုးပွါး, အထီးကြွက်၏ medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 782: 11-17 [PubMed]
80 ။ Alderson LM, Baum MJ ။ အထီးကြွက်ဦးနှောက်၏ mesolimbic နှင့် nigro-striatal လမ်းကြောင်းအတွက် dopamine ဇီဝြဖစ်ပေါ် gonadal steroids ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1981; 218: 189-206 [PubMed]
81 ။ Baum MJ, Melamed အီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အထီးကြွက်များတွင် dopamine ၏အာရုံကြောဇီဝြဖစ်ပေါ်သင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုး၏သက်ရောက်မှုများ Globus အမ် Dissociation ။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1986; 16: 145-148 [PubMed]
Reboot အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း: - အသက် ၁၁ နှစ်မှ စ၍ စွဲလန်းစေသောအရာ - ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ED နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်များ t.co/d7Fx38hTqs